सन्दीपले रोहित लाइ Twitter मा बधाई दिदा फ्यान हरुको प्रतिक्रिया, "मुम्बई मा जान लाग्या हो"? - Himali Patrika
सन्दीपले रोहित लाइ Twitter मा बधाई दिदा फ्यान हरुको प्रतिक्रिया, “मुम्बई मा जान लाग्या हो”?
हिमाली पत्रिका ४ कार्तिक २०७६, 6:10 am
भारतीय ब्याट्सम्यान रोहित शर्माले अहिले चलिरहेको साउथ अफ्रिका र भारतको टेस्ट क्रिकेट मा दोहोरो सतक बनाए। यससँगै रोहितले टेस्टमा २०० रन, एकदिवसीयमा २०० रन र टि–२० अन्तर्राष्ट्रियमा १०० रन पूरा गरे । उक्त सफलतालाई बधाई दिदै सन्दिप ले एक ट्विट गरेका थिए उक्त ट्वीट को रिप्लाई मा सन्दिप ला फ्यान हरुले निकै धेरै कुरा हरु लेखेका छन ।
— Sandeep Lamichhane (@IamSandeep25) 20 October 2019
यसको प्रतिक्रियामा फ्यानहरुले उनलाई मुम्बइ जान चाहेको हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।रोहित शर्मा इण्डियन प्रिमियर लिगमा मुम्बइ इण्डियन्सका कप्तान हुन् । सन्दिप पनि आइपिएलमा दिल्ली क्यापिटल्ससँग आबद्ध छन् । अहिले आइपिएलको ट्रान्सफर विन्डो खुला छ र यतिबेला क्लवहरुले अर्को क्लवका खेलाडी किन्न पाउँछन् । रोहित आइपिएलका सबैभन्दा सफल कप्तान पनि भएकोले सन्दिपलाई यस्तो सोधिएको हुन सक्छ ।